Biyabbaxa degdegga daawo sidan baa u ah
» Biyabbaxa degdegga daawo sidan baa u ah
Rag badan baa isla markii biyaha ka soo daata siiba marka ay naas taabtaan ama bahalkooda saaraan kulaylka farjiga haddaba waxaad ogaataan in aysan dambi aheyn oo uusan dhib kujirin hadii aad barato sida loo wanaajiyo xaaskaaga ama aaad adigaba ugu qanci leheed. waxaad kaloo ogaataan in ay tahay faaiideysi iyo waxbarasho khaas oo aadan banaana iyo meel walbo aadan ka sheegi barnaamidyada noocan
“Mida ugu weyn oo aad ku noqon karto qanciye ayaa ka mid ah in aad muruqa looyaqaan PC(pubococcygeal) muruqaas ama xidikaas ayaa ladoonayaa in aad kantaroli kartid, muruqaas ama xididkaas ayaa ah mid kudhagan xaniinyaha ragga. inta badani adkeenta iyo kantarolida xididkaas wuxuu keeni xaraaro iyo inta ay kugu qaadan karto xaraara bixida in aad kantaroosho, iyo in aad kantrooli karto wakhtiga ay kugu qaadan in aad kacsi jabto.
saad aragtaanba waa xidid ubaahan dhismo iyo kantaroolid si aad xiriix xaraaro leh u yeelatid isku taga.
Waxaad ku sameen kartaa exercise xididkaas asaga ah, balse marka hore waxaad u baahantahay in aad aqoonsatid xididkaas asaga ah oo loo soo gaasado PC, aqoonsida waa sida tani soo socoto, waxaad sameysaa adigoo kaadineysi isku day in aad qabato kaadida ood hadana sii daaso, hadana qabo oo sii daa, labo ama sadex jeer markaad kaadida oo socoto qabatid ood sii deysid, qabashadaad iyo siideentaas waxaa sameenaya hooshaas xididka PCga. marka hada waxaad ogaataa xididka aad marna qabaneysay oo aad sii deyneysay in uu ahaa pcgii ama (Pubococcygeal). Hada marka waxaa lagaa doonayaa maadaama ad aqoon uleedahay xididkaas in aad sidii adigoo kaadida afjaraya camal marna dhuujiso ilaa 5 ilaa 10 sekeno, dabadeedna aad sii deyso oo uu sii deysanaado 5 ilaa 10 sekeno. qurbo.net ayaa ku leh intaas in aad ku cilcilisid dhoor jeer maalintiid ilaa 10 ilaa 15 jeer kadibna waxaad ogaan in aad dareento oo aad iyo aad kuu anfaco.
Maxaad moodi in uu excecieskan uusan wax kuu tareynin balse waxaad ogaataa in uu aad kuugu anfici doono sariirta.